Ch 5 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 5 Mark
5:1 Ary nandeha namakivaky ny ety an-dranomasina ho any amin'ny faritry ny tanin'ny Gerasena.
5:2 Ary raha mbola niala ny sambo, avy hatrany izy nihaona, avy teo amin'ny fasana, noho ny lehilahy azom-panahy maloto,
5:3 izay nanana ny fonenany amin'ny fasana; na efa olona afaka hamatotra azy, na dia tamin'ny gadra.
5:4 Fa rehefa voafatotra tamin'ny gadra matetika sy ny gadra, efa torotoro ny gadra, ary nopotehiny ny rojo; ary tsy nisy afaka nahafolaka azy.
5:5 Ary izy foana, andro sy alina, amin'ny fasana, na any an-tendrombohitra, ninananana sady niteti-tena tamin'ny vato.
5:6 Ary nony nahita an'i Jesosy teny lavitra, dia nihazakazaka ka niankohoka azy.
5:7 Ary niantso tamin'ny feo mahery, hoy izy:: "Inona no ho aminareo aho, Jesosy, ny Zanaky ny Avo Indrindra? Mananatra anareo aho Andriamanitra, fa tsy mampijaly ahy. "
5:8 Satria Jesosy efa nanao taminy, "Mialà amin'ny lehilahy, ry fanahy maloto. "
5:9 Ary izy nanontany azy: "Iza ny anaranao?"Ary hoy izy taminy:, "Legiona no anarako, satria maro izahay. "
5:10 Ary niangavy azy fatratra, ka dia tsy handroaka azy avy any amin'ny faritra.
5:11 Ary amin'izany toerana, akaikin'ny tendrombohitra, nisy kisoa, sakafo.
5:12 Ary ny fanahy niangavy azy, nanao hoe:: "Alefaso izahay ho any anatin'ny kisoa, ka dia mba hiditra any aminy. "
5:13 Ary Jesosy avy hatrany nanome alalana azy ireo. Ary ny fanahy maloto, miala, niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andiany ny tokony ho roa arivo nitratrevatreva tamin'ny hery lehibe any an-dranomasina, ka dia maty tany amin'ny ranomasina.
5:14 Ary ireo izay niandry azy dia nandositra, ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany ambanivohitra. Ary izy rehetra, nivoaka ny olona mba hijery izay nitranga.
5:15 Ary tonga teo amin'i Jesosy. Ary nahita io lehilahy io, izay efa raiki-tahotra noho ny demonia, mipetraka, nitafy lamba sady ary saina salama saina amin'ny, dia natahotra.
5:16 Ary izay efa nahita dia nanazava tamin'izy ireo ny fomba efa nataonareo tamin'ny olona izay nanana ny demonia, sy ny amin'ny kisoa.
5:17 Ary nanomboka ny mitalaho aminy, ka mba hiala amin'ny fari-taniny.
5:18 Ary raha mbola niakatra an-tsambokely, ny lehilahy izay efa raiki-tahotra noho ny demonia nifona tamin'i Jesosy izy, ka dia mba hanaraka Azy.
5:19 Ary tsy hamela azy, fa hoy izy taminy:, "Mandehana any ny vahoakanao, ao an-tranony, ary nanambara taminy ny lehibe no zavatra nataon'ny Tompo ho anao, sy ny fomba efa naka hangoraka anao. "
5:20 Dia nandeha izy ary nanomboka nitory tany amin'ny tanàna folo, akory ny halehiben 'ireo ny zavatra efa nataon'i Jesosy taminy. Ary izay rehetra gaga.
5:21 Ary Jesosy, nony nita an-tsambokely, noho ny ety indray, vahoaka be niangona teo anatrehany. Ary efa akaiky ny ranomasina.
5:22 Ary ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny synagoga, atao hoe Jairo, nanatona. Ary nony nahita azy, dia lavo niankohoka teo amin'ny tongony.
5:23 Dia nivavaka azy indrindra, nanao hoe:: "Fa ny zanako-vavy akaiky ny farany. Andeha re, mametraha ny tananao aminy, dia mba ho salama sy ho velona. "
5:24 Dia nandeha niaraka taminy Izy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy, ka dia nifanety taminy.
5:25 Ary nisy vehivavy izay nanana narary roa ambin'ny folo taona.
5:26 Ary efa niaritra tamin'ny mpanao fanafody maro be avy, ary izy efa nandany ny fananany rehetra izy tamin'ny tsy mahasoa mihitsy, fa izy kosa lasa ratsy.
5:27 Avy eo, rehefa nahare ny amin'i Jesosy, dia nanatona avy any anaty vahoaka ivohony, ary nanendry ny lambany.
5:28 Fa hoy izy:: "Satria raha mikasika na dia ny lambany, Aho, dia ho voavonjy. "
5:29 Ary niaraka tamin'izay dia, ny loharanon'ny ny ra tonga maina iny, ka tsapany tao amin'ny tenany fa sitrana izy efa avy ny ratra.
5:30 Ary niaraka tamin'izay Jesosy, fantany tao am-pony fa nisy hery izay mivoaka avy aminy, nitodika ny vahoaka, nanao hoe:, "Iza no nikasika ny lambako?"
5:31 Ary ny mpianany nanao taminy hoe:, "Hitanareo fa ny vahoaka manodidina anao mamotsitra, nefa hoy ianareo:, 'Iza no nikasika ahy?'"
5:32 Ary nijery manodidina Izy hizaha ny vehivavy izay efa nanao izany.
5:33 Na izany aza tena, ny vehivavy, amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, satria fantany izay nitranga tao an-kibony, nandeha ka lavo niankohoka teo anatrehany, ary izy kosa nilaza taminy ny marina rehetra.
5:34 Ary hoy Jesosy taminy:: "Anaka, Ny finoanao efa namonjy anao. Mandehana soa aman-tsara, ary ho sitrana avy amin'ny ratra. "
5:35 Ary raha mbola niteny, dia tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny synagoga, nanao hoe:: "Efa maty ny zanakao-vavy. Nahoana no mbola manahirana ny Mpampianatra ihany?"
5:36 Fa Jesosy, raha nandre ny teny nataony izany, hoy Izy tamin'ilay mpanapaka ny synagoga: "Aza matahotra. Mila minoa fotsiny ihany. "
5:37 Ary tsy hamela na iza na iza hanaraka Azy, afa-tsy i Petera, ary James, sy Jaona, rahalahin'i Jakoba.
5:38 Dia niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ny synagoga. Ary nahita ny tabataba, ary nitomany, ary be fidradradradran'ny.
5:39 ary raha niditra, dia hoy izy taminy: "Nahoana no mitoloko sy nitomany? Ny tsy maty razazavavy, fa matory. "
5:40 Dia naneso an'i Jesosy. Na izany aza tena, dia nandroaka azy rehetra hiala, dia nitondra ny ray aman-dreniny ny zazavavy, sy ireo izay niaraka taminy, ary dia niditra tao amin'ny toerana nisy ilay zazavavy mandainga.
5:41 Ary nandray ny zazavavy ny tanana, dia nanao taminy hoe:, "Talitha koumi," izay midika, "Ry zazavavy, (Lazaiko aminareo) mitsangàna.
5:42 Ary niaraka tamin'izay ny ankizivavy nitsangana ka nandeha. Ary izy roa ambin'ny folo taona. Ary izy ireo namely tampoka tamin'ny fahaverezan-kevitra lehibe.
5:43 Ary nandidy azy ireo mafy, mba tsy hisy hahalala ny momba izany. Dia nolazainy taminy mba hanome azy hanina.